Matupi Archives - Page2of 37 - Matupi Times Olthang
Matupi February 10, 2020
Matu Luhmuh Yae (Yangon) Lam Kaloh Matupi Sungvan Baptist Church Ah Meeting Asai Uh
Janaury31, 2020; Matupi , Sungvan Baptist Church kungsut tih Matupi lumuh yae Yangon ben lam kah Pa Ram Pul (Chairman), Pa Hla Yoep (Secretary) neh ahui rhoek tah micang noek lung 11:00 – 1:00 khui…
Matupi February 7, 2020
Pu Ngai Sak kah Omngaih Ciil Thuina
Nangmi kah Hlacam bomna rhang neh, 1. 20.2.2019, voi (71)nah Chin National Day vaengkah Olpungna dongah,Thong Im ah Kum (4 ) neh Hla(6)ahlaak uh, 1.Aa Bawng 2.Sawm Thang 3.Biak Thang4.ThangThen5.Htet Naing Oo6.Ring Sang Lian …
Matupi January 30, 2020
History of Batupuei Baptist Area
ဘုရား သခင် ကျေးဇူးတော် ကြောင့် နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ် ခရီး ကို ကောင်းမွန် စွာ ဖြတ်သန်း နိုင်သည့် အတွက် ဘုရားသခင် ကျေးဇူး တော် ချီမွမ်း ပါ သည်။ မတူပီ မျိုးနွယ် စု သည် ချင်း ပြည်နယ် ရှိ မတူပီ မြို့နယ်၊ ပလက်ဝ မြို့နယ်၊ မင်းတပ် မြို့နယ် တွင် ပျံ့နှံ့ နေထိုင်…
ဘုရား သခငျ ကြေးဇူးတောျ ကွောငျ့ နှဈပေါငျး ငါးဆယျ ခရီး ကို ကောငျးမှနျ စှာ ဖွတျသနျး နိုငျသညျ့ အတှကျ ဘုရားသခငျ ကြေးဇူး တောျ ခြီမှမျး ပါ သညျ။ မတူပီ မြိုးနှယျ စု သညျ ခငြျး ပွညျနယျ ရှိ မတူပီ မွို့နယျ၊ ပလကျဝ မွို့နယျ၊ မငျးတပျ မွို့နယျ တှငျ ပြံ့နှံ့ နထေိုငျ လကြျ…
Matupi January 24, 2020
Preschool Teacher Training Asai Uh
Janaury7, 2020; Matu­pi , Sungvan Baptist Church impuei khui ah Oepsoeh saeng­camoe cangpuei saya/ma na kah tintan ( ECCD) tah Chin ram hlanghing pomsang ( Luhmuh win Than) benlam ka­loh rhoi hui loh cang puei…
Matupi January 23, 2020
“မိုင်တိုင်၅၁ ,Exodus နဲ့ကျနော်”
မိုငတြိုငြ ၅၁ နဲ့Exodus ဟာကွှနတြော့ဘဝအတှကအြရေးကှီးတဲ့ အစိတအြ ပိုငြးတှဖှဈေတယြ။ကမွြးစာအုပစြပှီးဖတရြှု့လေ့လာ တဲ့အခွိနကြစ Exodus (ထှကမြှောကရြာ)ကမွြးကိုကှိုကနြှဈသကခြဲ့ပါတယြ။အထူးသဖှင့နြာ မယတြခုစီတိုငြးဟာ သူ့အဓိပျပါယနြဲ့သူရှိအောငဘြုရားအကှံအစညရြြှခဲ့တယြ။ Ecodus 2:10 မှာ She named him Moses,saying “I drew him out of the water”မောရှေ ဟာရထေဲမှာမွောနတေဲ့ပုခကကြဆယယြူထားတဲ့သူဖှဈလို့”မောရှအမေညဖြှငိ့မှည့ြ ၏။ အကှောငြးမူကား၊ရထေဲကနှုတြ ယူသညဟြုဆိုသတညြး”လို့ဖောပြှထားတယြ။မိမိရဲ့ဘဝအခှနမှေနေကြိုဖောပြှပေးတာဖှဈတယြ။ ထို့အတူပဲExodusရဲ့ဖှဈတညခြကွကြအီဂစွနြိုငငြံမှာကွေးကွှနဘြဝဖှင့ပြငပြနြးဆငြးရဲစှာအလုပအြကွှေးပှုနတေဲ့ဣသရလေ(Israel)လူမွိုးတှရေဲ့ငိုကှှေးသံကိုကှား၍ဘုရားသခငြ မှMoses အားဖှင့နြို့နဲ့ပွားရညစြီးသောပှညတြောသြဈသို့ပို့ဆောငဖြို့တာဝနြ ပေးခှငြးကိုအခှခေံတာဖှဈတယြ။Exodus 3:17 ;…
Kunglong Tlang Kah Mingham Koi
Yan ah NuPa loh Pathen olana ming hlan vaeng ah SungRhai lohaka tlungaka thang hlang hing kah Muei – hlaaka tu tih tluengaka ngawn, Lungnu…
Kunglong Tlang Kah Mingham Koi (cong nah)
Tahaeatah, Matupi – Boirha – Boirha – Lailen­pi Mawtaw ka long thai dong ah, Mawtaw ka neh Saike neh cet u coeng. Hlamat ah Khoyin daeng Matupi ah pai u dae, tahae ah…
Matupi January 22, 2020
Matupi District Election Commis¬sion Lam Kaloh Meeting Lamhma Cuek Akhue
Janaury 13, 2020; Matupi District khui kah 2020 kum Kolram pum tom election kawng dong ah District commission oficer Pa L Cang Toi loh Matupi peng election Commis­sion yung ha Political party (6) he mincang…
Matupi Peng Hlang Misoep Yung Lamkaloh (Form-66/6) Asai Li
Date 17th, 12.2019 hnin ah ( Pyan­cia yae neh Pyithuh setsan yae) yung ah hmat pungtin Yung mawt kung U Khua Khaw neh bibi kung na tah Khoboi vang khui kah ka om hlang duek…
“MATUPI AH MATU CAA MEYET LAE A CANG U EH?” (67,369)
Donald Trump neh Kim Jong-Un Historical Summit ah senathuh rhoi (46,891)
Matupi olthang (40,959)
The Matupi Times olthang (37,676)
Italian Industrial ung (35,907)
ညီ​ေလး မ​ေသမခ်င္​း မွတ္​ထား…. (34,456)
North-Korea loh America neh Thikat la Caboi vel hmaih ham abih (17,600)